Linux kernel 3.3 တွင် RC (ရှိပြီးသားထုတ်လွှတ်ခံရမည့်) ရှိပြီးဖြစ်သည် Linux မှ
၏နှစ်ပတ်အတွင်းပြီးနောက် Linux kernel 3.2 ကိုထုတ်ပြန်ခဲ့သည်, Linus Torvalds ကြော်ငြာ ဖြန့်ချိခံရဖို့ပထမ ဦး ဆုံး 3.3 ကိုယ်စားလှယ်လောင်း။
ဒီ kernel ၏မူကွဲတွင်ပါဝင်မည့်အပြောင်းအလဲများ / သတင်းများဒီမှာ။
ထို့အပြင်လုပ်ဆောင်ချက်များကို software ကုဒ်ထည့်သွင်းခဲ့သည် RAIDအသုံးပြုရန်အတွက်ဒေတာတစ်ခုကို volume တစ်ခုမှတစ်ခုသို့ရွှေ့ပြောင်းရန် ဆိုလိုသည်မှာ၊ "hot replace" သို့ပြန်ဆိုသည်
ဗိသုကာအထောက်အပံ့ကဆက်ပြောသည် Texas Instruments'C6X, ACPI ၅.၀နည်းပညာအတွက်လည်းကောင်းတယ် LPAE (အကြီးစားရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ Addres extension ကို) က ARM, အချို့ပရိုဆက်ဆာနှင့်အတူ ARM v7 သူတို့က 4GB ထက်ပိုတဲ့ memory ကိုသုံးနိုင်တယ်။
developer များက၎င်းတို့သည်အသံအထောက်အပံ့ကိုတိုးတက်စေသည်ဟုကျွန်ုပ်တို့အားပြောပါသည် HDMI ယာဉ်မောင်းအတွက် DRM / KMS အတွက် AMD ၏ နှင့်ဂရပ်ဖစ်ချစ်ပ်များ Nvidia က.
vSwitch ကိုဖွင့်ပါ နှင့် 'team' အနေဖြင့်အလုပ်လုပ်မည့် Ethernet driver တစ်ခုသည် network ports ပေါင်းများစွာကို virtual network တစ်ခုသို့ပေါင်းစည်းလိမ့်မည်။
ငါတို့အရင်ပြောခဲ့သလိုပဲ Android drivers တွေကိုထည့်ပေးမှာပါ.
၏ဂရပ်ဖစ်ယာဉ်မောင်း GMA500 အတွက် US15W de Intel ကအချို့နှင့်အတူဖြစ်ပျက်အဖြစ် Hyper V ကို.
ဤအပြောင်းအလဲများအားလုံးနှင့်အတူ၊ ပထမဆုံးဖြန့်ချိမည့်ကိုယ်စားလှယ်လောင်း (RC) အတွက် tar ဖိုင်တွင်စုစုပေါင်းကုဒ်လိုင်းပေါင်း ၁၅,၂၀၇,၅၇၈ ဖိုင် ၃၈,၁၇၃ ဖိုင်ပါဝင်သည်။
အခုတော့ ... ငါရေရှည်အထောက်အကူ kernel ကိုနေဆဲသုံးနိုင်သည်ကိုဖော်ပြခြင်းငှါတရားဝင်ထင်ပါတယ် (2.6.32.54 y 3.0.17) ။ အကယ်၍ သင်ကနောက်ဆုံးပေါ် kernel ကိုမလိုချင်ဘူးဆိုရင်၊ တည်ငြိမ်မှုရဖို့လုပ်ဆောင်ချက်အသစ်တွေကိုစွန့်လွှတ်ဖို့ဆန္ဒရှိရင်၊ အသစ် kernel = ယေဘုယျအားဖြင့်တည်ငြိမ်မှုပြproblemsနာများဆိုတာလျှို့ဝှက်ခြင်းမရှိသောကြောင့်သင့်ကိုအကြံပြုသည်။
မည်သို့ပင်ဖြစ်စေ၊ ကျွန်ုပ်ထင်မြင်ချက်အရဤ kernel အသစ်သည်အထူးသဖြင့်၊ ဆာဗာများနှင့်အလုပ်လုပ်သူများအတွက်၊ ကွန်ပျူတာအသုံးပြုသူများအတွက်တိုးတက်မှုအမြောက်အများကိုဆောင်ကြဉ်းလိမ့်မည်။
အသေးစိတ်အချက်အလက်များ။ H- အွန်လိုင်း
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Linux မှ » GNU / Linux များ » Linux kernel ၃.၃ တွင် RC (ရှိပြီးသားထုတ်ခံရမည်) ရှိပြီးသား
Linux Kernel ၃.၃ အတွင်းအပြောင်းအလဲကြီးများ
Linux 3.3 Kernel တွင်အပြောင်းအလဲကြီးများ၊ အကောင်းဆုံးမှာ ARM အတွက်ပံ့ပိုးမှုဖြစ်သည်
Pentagon မှာ Android ကိုသုံးဖို့ခွင့်ပြုထားတယ်